U keydi Lacag Dugsiga barbaarinta iyo Deymaha Waxbarida ee ka imaaneyso Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver - Denver Preschool Program
Waad ku mahadsantahay xiisahaaga ee Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver!
Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver (DPP) waa hay’ad aan faa’ido doon aheyn oo caawiso dhammaan qoysaska ku nool Caasimada iyo Gobolka Denver inay keydiyaan lacagta dugsiga barbaarinta. Waxaa mahad leh codbixiyayaasha Denver, deeqaha waxaa laga heli karaa dhinaca iibinada caasimada ka go’antahay oo lagu caawinayo qoys walboo Denver ee leh canug sannadka dugsiga barbaarinta ka hor inay ku keydiyaan lacag qarashaadka dugsiga barbaarinta.
Intee ayaad ku keydin kartaa qarashaadka dugsiga barbaarinta bil walba?*
Qiyaaso Dhibcahaaga Waxbarshada DPP
Cabirka Qoyska 2 3 4 5 6 7 8
Ka qeybqaadashada Maalin Buuxdo Maalin Barkeeda Maalin La kordhiyay
Qiimeynta Dugsiga 1 2 3 4 5
Sannadka Dugsiga 2021-2022 2022-2023
*Geli sharaxaadaha waxbarida si aad u aragtid waxbaridaada imaan karta oo dugsi walba.
Sidee ayaad u bilaaban kartaa?
1 –Dooro Dugsiga barbaarinta
Haddii aadan helin dugsiga barbaarinta waxaad ku bilaabi kartaa cilmi baaristaada halkaan:
Ama la xiriir Qorsheeyahaha Dugsigeena barbaarinta ee enroll@dpp.org ama 303-595-4377 oo ku caawi raadinta dugsiga barbaarinta.
2-Gudbi Arjigaaga oo Deymaha Waxbarida DPP
Si aad ugu qalantid deymaha waxbarida, canugaaga waa inuu:
Dagaa Caasimada iyo Gobolka Denver
Imow 4 ama ka hor Oktoobar 1 ee sannad dugsiyeedka oo midka aad codsaneysid
Ka qeybgal barnaamijka ka qeybqaadanayo-DPP
Ka baro wax badan ee Ku saabsan Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver (DPP)
Ka aqri Su’aalaha Badanaa La isweydiiyo (FAQs) hoos si aad wax badan uga baratid wax ku saabsan Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver, Deymaha Waxbarida Dugsiga barbaarinta iyo Sida loo Helo Dugsiga barbaarinta. Haddii aad qabtid su’aalo dheeraad ah ama aad jeclaan laheyd inaad qof la hadashid si aad wax badan uga baratid DPP fadlan i-meel noogu soo dir info@dpp.org ama soo wac 303.595.4377.
FAQ-yada Deymaha Waxbarida DPP
DPP miyuu ku weydiiyay sharciga socdaalka carruurta iyo qoyska markii isaga ama iyada diiwaangashanyahay?
Maya. Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver wuxuu ka diiwaangeliyay ardayda iyada oo aan laga eegin sharcigooda socdaalka iyo takoor la’aan ee oo ku saleysan jinsiyada, qowmiyada, midibka, asalka dhalashada ama diinta.
Maxaan uga baahanahay dhameystirka arjiga DPP?
Si loo dhameystiro arjiga DPP, waxaad u baahannahay inaad bixisid cadeynta ee: 1) da’da canugaaga 2) ciwaankaaga hadeer ee gudaha Caasimada iyo Gobolka Denver iyo daqli (3) bilood ah.
DPP way ogolaaneysaa:
Koobiga shahaadada dhalashada canugaaga, diiwaanka kaniisada, diiwaanka maxkamada, diiwaanka tallaalka ama diiwaanka isbitaalka oo muujinayo taariiqda dhalashada oo cadeynta da’da canugaaga.
Koobiga heshiiska guriga, cadeynta milkiilaha guriga, ama biilka qarashaadka sida gaaska, korontada, ama biyaha ee muujiso labadaba ciwaanka adeega iyo magaca waalidka/masuulka oo cadeynta ciwaankaaga.
Ugu yaraan afar isbuucyo isku xiggo oo waraaqaha cadeynta daqliga ee waalidka/masuulka ee qoyskaaga oo cadeynta daqliga.
Waxaan sidoo kale ogolaan karnaa afidheefidhka qaar ka mid ah waraaqaha loo baahanyahay. Haddii aad xiiseyneysid afidheefidhka ama haddii ay jiraan wax walba oo aan kugu caawin karno, fadlan dareen xoriyad aad noogu soo wacdid 303.595.4377 ama i-meelka info@dpp.org.
Su’aalaha Badanaa La isweydiiyo (FAQs) ee Dugsiga barbaarinta
Maxaan uga diiwaangeliyaa canugeyga dugsiga barbaarinta?
Tobonayeeyo sanno oo cilmi baaris waxay muujineysaa in dugsiga barbaarinta sare u qaado guusha dugsiga, waxay u hogaamisaa shaqooyin wanaagsan iyo xittaa ka hortagtaa dambiga. Iyada oo faa’idooyinka u muuqato inay tahay mida ugu weyn ee halista carruurta ee duuldarada dugsiga, faa’idooyinka dugsiga dhammaan carruurta aan laga eegin xaaladooda dhaqaalaha.
Maxaa loola jeedaa qiimeynta tayada?
Qiimeynta Tyaada Colorado Shines iyo Nidaamka Hormarinta (QRIS) waxay aasaastay wadada hormarinta tayada oo loogu tallogalay bixiyayaasha. Daryeelka carruurta shatiyeysan iyo bixiyayaasha waxbarashada hore waxaa laga qiimeeyaa shan aagag, kadib waxaa la siiyaa buundo isku dhafan oo ka bilaabaneyso 1 illaa 5 iyo 5 oo ah tan ugu wanaagsan. Buundadaan waxay aasaastaa aasaaska oo daryeelka carruurnimada hore iyo bixiyayaasha waxbarashada hormarin karaan tayada adeegyada si markaas si wanaagsan ugu adeegaan carruurta iyo qoysaskooda.
LAMA HUBO WAXA LA SAMEEYO MARKA XIGTO?
La xiriir Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver
Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino helitaanka iyo bixinta dugsiga barbaarinta tayo sareeyo ee kuu dhow. Wixii su’aalo ah ee ku saabsan Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver, ama wixii caawinta la isaga diiwaangelinayo taageerada waxbarida, nagala soo xiriir warbixinta hoose.
Su’aalaha Deynta Waxbarida
Gudbi Arjiyada Deynta Waxbarida
I-meel ahaan: info@dpp.org
Fakis Ahaan: 303.295.1750
Boosto Ahaan: Barnaamijka Dugsiga barbaarinta Denver, P.O. Box 40037, Denver, CO 80204-0037
ILLAHA DHEERAADKA AH EE QOYSASKA
U baahan daryeelka carruurta ee Denver oo canuga aan weli gaarin da’da dugsiga barbaarinta? Soo wac 2-1-1- si loogu xiro United Way, Taas oo bixiso illaha daryeelka carruurta iyo adeega gudbinta.
U baahan daryeelka carruurta ama dugsiga barbaarinta ee ka baxsan Denver? Kala xiriir Colorado Shines wixii liiska dhameysrtiran ee barnaamijyada daryeelka shatiyeysan ee la heli karo ee gobolka ama soo wac 1-877-388-2273.
*Tirada taageerada qoyska waxay helaan waxay ku xirantahay cabirka qoyska iyo daqliga, tayada dugsiga barbaarinta doorteen, iyo baaxada waqtiga canuga ka qeybgalo dugsiga barbaarinta. Qiyaasta kore waxay ku saleysantahay goobaha aad gelisay iyo qiimeynta dugsiga oo 4. Haddii dugsigaaga barbaarinta aanan jaal la aheyn dugsiga barbaarinta DPP, fadlan ku dhiiro geli iyaga inay nala soo xiriiraan barashada sida la isaga diiwaangeliyo. Miisaankayaga amaahda waxbarashadu wuxuu u dhexeeyaa $ 15,930- $ 169,520 dakhliga guud ee sanadlaha ah. Haddii aad sameyso $ 15,930 ama ka yar deyntaadu waxay la mid tahay lacagta lagu muujiyey dakhliga $ 15,930. Haddii aad sameyso $ 169,520 ama ka badan deyntaadu waxay la mid tahay lacagta lagu muujiyey dakhliga $ 169,520. Qoysaska oo dhan waxay helayaan taageero waxbarasho iyadoon loo eegin dakhliga soo gala.
Barnaamijka Dugsiga Xannaanada Denver wuxuu ka dhigayaa dugsi barbaarin tayo leh dhammaan qoysaska Denver ee leh 4 sano jir carruur ah iyada oo loo marayo canshuurta iibka ee qaaska ah oo markii ugu horreysay ay ansixiyeen codbixiyeyaasha 2006 lana cusbooneysiiyay lana kordhiyay 2014. Iyadoo loo marayo sannad dugsiyeedka 2018-2019, DPP waxaa lagu qiyaasay inay leedahay waxay bixisay in ka badan $ 122 milyan oo ah taageerada waxbarashada si ay uga caawiso in ka badan 54,000 carruurta Denver inay xaadiraan dugsiga xannaanada carruurta ee ay doorteen qoyskooda, iyagoo aasaasaya aasaaska ilmo kasta ee nolosha oo dhan iyo guusha.